टियुसन पढाउने सरले : म कोठा भित्र जाने बि’त्तिकै ढाे’का ब’न्द गर्नु भयाे त्यसपछी … – List Khabar
Home / समाचार / टियुसन पढाउने सरले : म कोठा भित्र जाने बि’त्तिकै ढाे’का ब’न्द गर्नु भयाे त्यसपछी …
टियुसन पढाउने सरले : म कोठा भित्र जाने बि’त्तिकै ढाे’का ब’न्द गर्नु भयाे त्यसपछी …
admin November 24, 2021 समाचार Leaveacomment 123 Views
सल्यानकाे बागचाैरमा एक महिना अघि शिक्षकबाट क र णी भनेर प्रहरीमा जाहेरी दिएकी १४ वर्षीया बालिका सपना (परिवर्तित नाम) अहिले सम्पर्क बिहिन भएकी छन् । गएको साउन ८ गते सपनाले आफ्नै शिक्षकले आफुलाइ क र णी गरेकाे भन्दै प्रहरीमा जा हे री दिएकी थिइन्।
सपनाले आफुमाथी क र णी भएकाे प्रहरीमा जा हे री दिएपछि साउन १० गते सपनाकाे घरमा पुगेर लेकाली अनलाइनले प्रत्यक्ष कुराकानी गरेकाे थियाे । करिब आधा घण्टाकाे कुराकानीमा सपनाले घटनाकाे बारेमा सबै बताएकी छन्। कसरी भएकाे थियाे घटना? बागचाैर नगरपालिका २ निवासी हुन् भने शिक्षक रामचन्द्र केसी पनि साेहि वडा बासी हुन् ।
केसीले बागचाैरमै ब्राइट रोजल्याण्ड बोर्डिङ स्कुल संचालन गरिरहेका थिए र उनि बाेर्डिङका एमडी हुन् भने सपनाले साेहि स्कुलमा कक्षा ८ मा अध्ययन गर्थिन्।सपनाकाे पहिले अर्का एक केटासँग प्रेम थियाे । त्याे प्रेम घर परिवारले थाहा पाएपछि पछि उक्त केटा सँगकाे प्रेम वि’छेद भयो ।
सपनाका बुबा बिदेशमा थिए । छोरीको अर्का केटा सँग प्रेम भएको उनले थाहा
पाएपछि रामचन्द्रलाइ आफ्नी छाेरीलाइ सम्झाइदिन र राम्राे सँग पढाइदिन उनले आग्रह गरेका थिए। त्यहि कारणले सुरु सुरुमा रामचन्द्रले आफ्नै छाेरी जस्तै ठानेर सपनालाइ सम्झाउने र पढाउने गर्थे । तर पछि शिक्षकले पनि सपनामाथी कु’दृ ष्टि ले हेर्न सुरु गरे।
याै न प्र स्ता वकाे सुरु कहाँबाट भयाे? २०७६ मंसिरमा विद्यालयबाट शिक्षक, शिक्षिका र विद्यार्थी किबी खेतिकाे अवलाेकन गर्ने गाडी रिजर्भ गरेर राेल्पा गए । राेल्पाबाट फर्किने बेला अध्याराे भैसकेको थियो । गाडीमा शिक्षक केसी अगाडीकाे क्याविन सिट छाेडेर बिचकाे सिटमा बसेकी सपनाकाे सिटमा आएर बसे। सपना सँग बसेपछि उनले गाडीकाे बत्ति समेत बन्द गरे । त्यसपछि सपनाकाे श रि रमा हात लि एर छु न थाले । सपनाले अ स हज मान्दै शिक्षकलाइ ह ल्ला गरिदिन्छु थालेपछि उनिले केहि गरेनन्।
‘बाइकमा सर र म सँगै गयाैं । बाटाेमा सरले एउटा हातले हेन्डिल समाउनु हुन्थ्याे, अर्काे हातले पछाडी मेराे घुँडा समाउनु हुन्थ्यो । त्यसपछि २०७६ पुस २४ गते श्रीनगरमा प्यवसन सल्यानकाे वार्षिकत्वस कार्यक्रम थियो । कार्यक्रममा सबै विद्यार्थीहरुलाइ लिनकाे लागि ब्राइट रोजल्याण्ड बोर्डिङ स्कुलले एउटा गाडी रिजर्भ गर्याे । कार्यक्रममा सपनाले नृत्य पनि देखाउने तालिका थियाे।
गाडीमा सबै शिक्षक, शिक्षिका र विद्यार्थीहरु गए तर रामचन्द्र केसीले सपनालाइ आफुले बाइकमा लिने भन्दै गाडीमा जान दिएनन् । गाडी अगाडी गयाे । सपना र रामचन्द्र पछाडी बाइकमा गए। सपना भन्छिन्, ‘बाइकमा सर र म सँगै गयाैं । बाटाेमा सरले एउटा हातले हेन्डिल समाउनु हुन्थ्याे, अर्काे हातले पछाडी मेरो घुँडा समाउनु हुन्थ्याे । मैले सर यस्ताे किन गर्नुहुन्छ भनेर साेध्दा उहाँले बाइक यसरी नै चलाउछन् भनेर जवाफ दिनुभयाे। अनि मैले पनि यस्तै हाेला त भनेर केहि भनिन्।’
श्रीनगरमा पुगेपछि सपनाले कार्यक्रममा नृत्य पनि देखाइन् । साँझ कार्यक्रम सकिएपछि रामचन्द्रले रिजर्भ गरेकाे गाडीलाइ अगाडी जान भने तर आफ्नाे बाइक बि ग्रिएकाे भन्दै मर्मत गर्न तिर लागे । बाइक मर्मत गर्दा र अन्य व्यक्तिहरु सँग गफगाफ गर्दा गर्दै श्रीनगरबाट साँझ ७ बजे सपना र रामचन्द्र बागचाैर तर्फ हिडे। सपना भन्छिन् ‘श्रीनगरबाट हिड्दा रात परिसकेकाे थियाे । चाख्लिघाट नजिकैकाे जंगलमा आउँदा सरले बाइक राेक्नु भयाे। अनि माथी डाँडातिर जाउँ भन्दै मलाइ बाइकबाट झर्न आग्रह गर्नु भयाे । तर म बाइकबाट झर्न मानिन्।
त्यतिकैमा उता रिजर्भ गाडीमा हुनुभएकाे सरहरुले रामचन्द्र सरलाइ किन ढिला गरेकाे भन्दै फाेन गर्नु भयाे । जवाफमा रामचन्द्रसरले मेराे बाटाेमा बाइक बि ग्रेकाे छ भन्नु भयाे । त्यसाेभए हामी गाडी लिएर आम भन्दै सरहरुले प्रश्न गर्नुभयाे । पर्दैन एकैछिनमा बाइक बन्छ । हामी आइहाल्छाैं, तपाइहरु जाँदै गर्नुहाेस भनेर रामचन्द्र सरले जवाफ दिनु भयाे।’
चाख्लिघाटकाे जंगलमा सपनाले बाइकबाटै ओर्लिन नमानेपछि रामचन्द्र त्यहाँ धेरै क’रकाप नगरेर अगाडी बढे । कालाखेत र थारमारेकाे बीचमा पर्ने स्याउली बजार नजिकैकाे जंगलमा आइसकेपछि फेरि रामचन्द्रले बाइक राेकेर जंगलमा जाउँ भन्दै सपनालाइ ब’ल ज फ्ती गर्न थाले । त्यहाँ पनि सपनाले न मानेपछि उनिहरु बागचाैर पुगेर आ-आफ्नाे घर तिर गए।
‘म माथी त्यस्ताे कार्य गरेपछि म राे’ए । सरले याे कुरा बाहिर भनेपछि तिम्राे नै बे’इज्जत हुन्छ भन्नुभयाे । मैले पनि त्यहि ठानेर कसैलाइ पनि भनिन्।’ याे घट’ना घटेकाे केहिदिन पछि बिहान एक्कासी सपनालाइ रामचन्द्रले स्कुलमा ट्युसन छ पढ्न आउनुपर्याे भन्दै फाेन गरे । सपना भन्छिन्, ‘सरले फाेन गरिसकेपछि म पढ्न भन्दै स्कुल गए, तर त्यहाँ काेहि पनि रहेन्छन्।
अनि भित्र अफिसमा जाँदा रामचन्द्र सर मात्रै एक्लै हुनुहुदाे रहेछन् । म भित्र जान बित्तिकै सरले अफिसकाे ढाेका बन्द गर्नु भयाे । किन यस्ताे गर्नुहुन्छ सर भन्दै म ठुलाे स्वरमा बाेल्न थाल्दा सरले ठुलाे स्वरमा नबाेल भनेर ह प्का उन थाल्नुभयाे । त्यसपछि मलाइ ज’ व र जस्ती गर्नुभयाे।’ ज’वरजस्ती गरिसकेपछि सपनालाइ याे कुरा बाहिर कसैलाइ पनि नभन्न रामचन्द्रले ड’र देखाए । ‘म माथी त्यस्ताे कार्य गरेपछि म राे’ ए । सरले याे कुरा बाहिर भनेपछि तिम्राे नै बे ’इ ज्जत हुन्छ भन्नुभयाे । मैले पनि त्यहि ठानेर कसैलाइ पनि भनिन्।’
विस्तारै रामचन्द्रले सपनालाइ माया देखाउन थाले र सपना पनि रामचन्द्र प्रति आकर्षित भइन् । त्यसपछि उनिहरुकाे सधै नै याै न कृ या क लाप हुने गर्याे । रामचन्द्रले घरकी श्रीमती राम्राे नलाग्ने र घरकाे श्रीमतीलाइ छाेडेर सपनाकाे उमेर पुगेपछि सपनालाइ नै बिहे गर्ने आश्वासन दिए । र सपना पनि त्यहि कुरामा ढुक्क भएर सधै रामचन्द्रकाे स म्प र्कमा हुन भेट्न र घुम्न जान थालिन्।
कसरी बाहिरियाे क र णी काे कुरा ? पछिल्लाे पटक काेराेनाकाे कारण भएकाे लकडाउनमा रामचन्द्र र सपनाकाे खासै भेट हुन सकेन् । तर उनिहरु बीच पहिले देखिनै शा रिरिक स म्बन्ध भएकाे थियाे । त्यहि कारण सपनाकाे पेटमा दुइ महिनाकाे बच्चा बसिसकेछ । त्यसपछि दुवैमा त नाव श्रृजना उत्पन्न भयाे। ‘म सरलाइ धेरै माया गर्थाे । यदि सरले मलाइ बिहे गरेकाे भए म मु’द्दा दर्ता गर्ने थिइन् । सरले मलाइ बिहे गर्दिन भनेपछि मात्रै मैले उ’जुरी दिएकी हुँ।’
याे कुरामा के गर्ने भन्नेबारे दुवैमा कुराकानी भयाे । अन्तिम निष्कर्षमा सपनाले औ ष धि खा एर ब च्चा फा ल्ने सहमती भयाे। असारकाे अन्तिम साता तिर रामचन्द्रले औ षधि ल्याएर बागचाैर बजारकाे सडकमा सुटुक्क सपनाकाे हातमा दिए । औ ष धि कसरी खाने भन्ने बारेमा रामचन्द्रले सबै कुरा सपनालाइ फेसबुककाे म्यासेन्जरमा बताए। सपनाले पनि आफ्नाे स्वस्थ्यमा भैरहेकाे प्रत्येक समस्या रामचन्द्रलाइ बताइन् । केहिदिन सपनाले औ ष धि प नि खाइन् । सपनाले सधै एकान्तमा च्याट गर्ने कुरा घरमा थाहा पाइसकेपछि सपनाकी दिदि र भाइले उनलाइ नि’गरानी गरेका थिए।
साउनकाे पहिलाे साता सपनाकाे भाइले सपनाकाे फेसबुककाे पासवर्ड च्यान्ज गरेर आफ्नाे माेबाइलमा फेसबुक खाेल्याे । दिदिभाइले उनकाे फेसबुकमा सबैका म्यासेज हेर्ने क्रममा रामचन्द्रकाे म्यासेज पनि हेर्न भ्याए। म्यासेजमा सपनाकाे र रामचन्द्रकाे कुराकानी देख्दा उनिहरु एकाएक रुखबाट ख से ज स्ताे भए । स्कुलमा पढाउने गुरुले नै यस्ताे कार्य गरेकाे देखेपछि घरमा आमा र बिदेशमा रहेका बुबालाइ समेत उनिहरुले खबर गरे । त्यसपछि सपनाले पनि आफु र रामचन्द्रकाे सम्बन्धबारे भएकाे सबै साँचाे कुरा खाेलिन्।
बिहे गरेकाे भए घटना प्रहरीमा जाने थिएन? सपना र रामचन्द्रकाे सम्बन्धकाे बारेमा घरमा सबैलाइ थाहा भएपछि याे खबर सुरुमा रामचन्द्र कहाँ पनि पुग्याे । सुरुमा रामचन्द्रले आफुले केहि नगरेकाे याे सब आफ्नाे फेसबुक आइडी कसैले ह्या क गरेर लेखेकाे बताए। तर पछि उनले घ’टना स्वीकार गरेर सपनालाइ बिहे गर्ने बताए। सपनालाइ बिहे गरेर काठमाडाैं लिने र आफ्नाे सम्पर्कमा आउन भने । सपनाले रामचन्द्र सँग जान तयारी गरेकाे बेला रामचन्द्र सम्पर्क बिहिन बने । त्यस्तै गर्दै एक दुइदिन सम्म समय बित्याे । पछि रामचन्द्रले कुरा फेर्दै भने, ‘म तलाइ बिहे गर्दिन, तँ जे गर्छेस गर ।’ त्यसपछि सपनाले परिवारकाे सहयाेगमा प्रहरीमा गएर जा’हेरी दिएकाे बताइन्।
सपना भन्छिन्, ‘म सरलाइ धेरै माया गर्थाे । यदि सरले मलाइ बिहे गरेकाे भए म मु’द्दा दर्ता गर्ने थिइन् । सरले मलाइ बिहे गर्दिन भनेपछि मात्रै मैले उ’जुरी दिएकी हुँ । हाम्राे सम्बन्धकाे बारेमा घर परिवारले थाहा नपाएकाे भए सायद हाम्राे स म्बन्ध लामाे समयसम्म भैरहन्थ्याे हाेला ।’ खकेन्द्र केसी ले तयार पार्नुभएको सामाग्री हामीले लेकाली अनलाईनबाट लिएका हौ।
Previous छोरीले टिकटकबाट लाखौ कमाउन थालेपछि बुवा साउदीबाट फर्किए । कमाएको पैसा छोरीले यस्तो गरिन (भिडियो हेर्नुस)
Next मृ:त्युअघि भुपेन्द्र बडुवालले आफ्नी जन्म दिने आमासंग बनाएका थिए यस्तो टिकटक भिडियो (भिडियोसहित)